ခင်ပွန်းကြီး ဆယ်ပါး | မေတ္တာရိပ်
← မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် ဦးဣန္ဒောဘာသ၏ ဆုံးမသြ၀ါဒ (မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် ဦးဣန္ဒောဘာသ
ခင်ပွန်းကြီး ဆယ်ပါး	Posted on April 30, 2011	by mettayate ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးကို ပြစ်မှားလျှင် ကျရောက်တတ်သော ရောဂါများမှာ –
၁) ရောဂါဆန်းတွေ ဖြစ်တတ်သည်။
၂) စီးပွားကို ခက်ခဲ ဆင်းရဲ ပင်ပန်းစွာ ရှာရတတ်သည်။
၃) ခန္ဓာကိုယ် နာကျင် ကျိုးကန်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရတတ်သည်။
၄) ပွေး၊ ၀ဲ၊ ယားနာ အရေပြားရောဂါ ဖြစ်တတ်သည်။
၅) ဘေးရန် အန္တာရာယ် ကျရောက်တတ်သည်။
၆) မင်းဘေးမင်းဒဏ် သင့်တတ်သည်။
၇) အကဲ့ရဲ့ အစွပ်စွဲ ခံရတတ်သည်။
၈) ဇနီး၊ မယား သမီး သားနှင့် ရှင်ကွဲ၊ သေကွဲ ကွဲတတ်သည်။
၉) လွန်စွာ ဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက်တတ်သည်။
၁၀) ဥစ္စာ ပစ္စည်းများ အရောင်းအ၀ယ် မဖြစ်၊ အလိမ်ခံရ၊ အခိုးခံရ၊ ဓားပြတိုက်ခံရ၊ မီးလောင်ခံရ စသည်ဖြင့် တနည်းနည်းဖြင့် ဆုံးရှူံးသွားတတ်သည်။
ခင်ပွန်းကြီး (၁၀)ပါး (ဦးသက်စိန်- မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ့အခြေခံ စာအုပ်မှ ကူးယူပါသည်။)
၁) ဗုဒ္ဓ – သဗ္ဗညုတ မြတ်စွာဘုရားရှင်
၂) ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ – ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ ဘုရားငယ်များ
၃) ရဟန္တာ – အာသဝေါ ကုန်ခန်းပြီးသော ရဟန္တာများ
၄) အဂ္ဂသာဝက – မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တပည့်သာဝကများ
၅) မာတာ – မွေးသမိခင်
၆) ပိတ – မွေးသဖခင်
၇) ၀ုဒ္ဓါ – မိမိထက် အသက်၊ သိက္ခာ၊ သီလ စသည်တို့၌ ကြီး၍ မြင့်မြတ်သူ
၈) အာစရိယ – ဆရာမြတ်
၉) ဟိတကရ – မိမိအပေါ် ကိုယ်၊ နှုတ်၊ နှလုံးဖြင့် ကူညီဖူးသူ
၁၀) ဓမ္မကထိက – မြတ်သောတရား ဟောကြားပြသသည့် ပုဂ္ဂိုလ်။
This entry was posted in ဆုံးမသြ၀ါဒများ. Bookmark the permalink.	← မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် ဦးဣန္ဒောဘာသ၏ ဆုံးမသြ၀ါဒ (မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် ဦးဣန္ဒောဘာသ